शहरी क्षेत्रमा फस्टाउँदो कौसी खेती– देखासिकी कि बाध्यता ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 02:49:15
जापानी समय : 06:04:15
शहरी क्षेत्रमा फस्टाउँदो कौसी खेती– देखासिकी कि बाध्यता ?
11 September, 2019 20:36 | अर्थ | comments | 9450 Views
आजभोलि फेसबुकमा कौसीमा तरकारी उमारेर ठूलो पुरुषार्थ गरेको देखाउँदै फोटो हाल्ने गरिन्छ । हुन पनि शहरी क्षेत्रमा खेतीपाती गर्ने खेतबारीमा घरैघर बनेपछि कौसीखेतीलाई प्रबद्र्धन गर्ने नीति नै बनेको छ ।
अहिले मुलुकका प्रत्येकजसो जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा कौसीखेती चम्केको छ । यस्तैमा पर्दछ म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको इन्द्रणी टोल । सो टोलका प्रत्येक घरका छतमा घिरौला, टमाटर, साग, धनियाँ, लौका र खुर्सानी लटरम्मै फलेका छन् । बढ्दो घर निर्माणसँगै बेनी बजारमा करेसाबारीका लागि समेत जमीन नभएपछि स्थानीयवासीले घरको छतमा तरकारी खेती गर्न थालेका हुन् । बेनी नगरपालिका–७ इन्द्रेणी टोलकी पूर्ण राम्जालीलले पाँचतला माथि डल्ले खुर्सानी फलाउनुभएको छ ।
श्रीमतीसँग दैनिक नियमित तरकारीको रेखदेख, पाउनलाई कोशेलीको रूपमा उपहारसहित होटलमा माग हुने कोरियनलगायत विभिन्न तरकारी घरबाटै बिक्री गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । अगामी वर्षदेखि होटलमा विक्री गर्ने उहाँको योजना रहेको छ ।
बेनीमा कौसी खेती गरिए पनि प्रविधिको ज्ञान नहुँदा समस्या भइरहेको बजारवासीको भनाइ छ । बेनीमा वर्षेनी कराडौँको तरकारी आयात हुन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार प्लाष्टिकको गमलामा समेत खेती गर्न सकिन्छ । करीब रु पाँच हजारको लगानीले पाँच वर्षसम्म नियमित तरकारी खेती गर्न सकिन्छ । गमलासहित केही आवश्यक सामानको खरीद गरी घरमै नर्सरीको स्थापना गरेमा लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने कृषिका जानकार बताउँछन् ।
माटो बिना नै काँक्रा उत्पादन